गौचन हत्याकाण्ड देखी ८८ किलो सुनकाण्डः के अपराध भए २०१७ मा ? यी हुन चर्चित आपराधिक घटना ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति १७ पुष २०७४, सोमबार १४:३० लेखक नेपालीजनता
काठमाडौ । २०१७ मा पनि अपराध कम भएन । अंग्रेजी क्यालेन्डर अर्थात् इस्वी संवतको वर्ष २०१७ आजदेखि बिदा हुँदैछ। यो वर्ष पनि देशमा अघिल्ला वर्षझैं आपराधिक गतिविधि वीसबाट उन्नासइ भएनन्।
देशमा भएको स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा हुने आपराधिक गतिविधि र विस्फोटनका घटनाले आतंकित बनाइ नै रह्यो।
सन् १०१७ को सुरुवातदेखि नै नेपाल प्रहरीको संगठनमा प्रमुखका लागि देखिएको विवाद उत्कर्षमा नै रह्यो। २०१७ विदा भइसक्दा पनि विवाद भने अझै सेलाएको छैन। संगठन बाहिर भने हत्या, लुट्पाट र आतंक भने मच्चिनै रह्यो। सन् २०१७ मा देशभर भएका १० चर्चित अपराधिक घटना।
१. गौचन हत्याकाण्ड
वर्षको अन्त्यतिर भएको निर्माण व्यवसायी शरदकुमार गौचनको हत्याकाण्ड यो वर्ष निकै चर्चित बन्यो। बा १३ च ४९४८ नम्बरको ल्यान्डक्रुजर प्राडोमा चढी निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष गौचन कार्यालय जाँदै गर्दा उनी माथि गोली प्रहार भयो।
नयाँबानेश्वरको ठूलो खरिबोट नजिकै भएको गोली प्रहारबाट घाइते भएका गौचनको उपचारका क्रममा सिभिल अस्पतालमा मृत्यु भयो। गौचनको हत्याका प्रमुख योजनाकार समिरमान सिंह बस्नेतसहित अन्य पाँच जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भयो। हत्यामा संलग्न अर्का अभियुक्त मनोज पुन भने अझै फरार नै छन्।
२.८८ किलो सुनकाण्ड
सेप्टेम्बरमा प्रहरीको इतिहासमा नै ठूलो मात्रामा रसुवा केरुङ नाका हुँदै काठमाडौं भित्र्याएको ८८ किलो बरामद भयो। बा १७ च ६४२७ नम्बरको टाटा कम्पनीको गाडीका सुन ल्याइएको थियो। प्रहरीले काठमाडौंको लैनचौरबाट गाडी चालक २४ वर्षीय मनोज अधिकारीसहित सुन वरामद गरेको थियो। तस्करीका मुख्य नाइके चिनियाँ नागरिक भएपनि मुख्य नाइके भने प्रहरीको फन्दामा पर्न सकेका छैनन्।
३.प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिए प्रविण
अगष्टमा ललितपुरको कुसुन्तीमा प्रहरीको इन्काउन्टरमा लागूऔषध कारोबारमा संलग्न प्रविण खत्रीको मृत्यु भयो। महानगरीय अपराध महाशाखाबाट खटिएको टोलीले खत्रीमाथि गोली प्रहार गरेको थियो। तर मृतका आफन्तको भने निर्दोष व्यक्तिलाई प्रहरीले गोली हानी मारेको बताउँदै आएका छन्। तर प्रहरीले भने इन्काउन्टर नभएर खत्री आफैंले सुसाइट गरेको दावी गरिरहेको छ।
प्रहरीको इन्काउन्टरमा मारिएका खत्री आफैं लागूऔषध प्रयोगकर्ता हुन्। खत्रीले केही वर्षदेखि ब्राउन सुगर लिँदै आएको प्रहरी बताउँछ। अत्याधिक लागूऔषध प्रयोग गरेपछि खत्रीलाई परिवारले सुधार केन्द्रमासमेत राखेको थियो।
सुधार केन्द्रमा रहँदा उनले लागूऔषध खान नपाएपछि बाथरुमको धाराको टुटी नै खाएका थिए। त्यससमय उनको अपरेसन नै गर्नुपरेको थियो। खत्री डिएसपी अवदेश विष्टका भाञ्जा हुन्।
४.दावा लामामाथि गोली प्रहार
अप्रिल ११ मा गौरीघाटमा डन दावा लामामाथि गोली प्रहार भयो। गौरीघाटस्थित दिव्या पार्टी प्यालेसको ‘जिम हाउस’मा लामामाथि गोली प्रहार भएको हो। गोली प्रहारबाट उनी घाइते भएका थिए। लामालाई कोखमा गोली लागेको छ। गोली हानेको केही समयपछि हङकङमा बसेका लोप्साङ लामाले घटनाको जिम्मेवारी लिएका थिए। लामाले आफ्नो व्यक्तिगत दुस्मनीका कारण दावा माथि गोली प्रहार गरेको प्रहरीले बताएको छ।
५.क्लब डेजभू प्रकरण
सन् २०१७ को अन्त्यतिर भएको क्लब डेजभू प्रकरण निकै चर्चामा रह्यो। यही विषयलाई लिएर काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित डेजाभू नाइट क्लबका सञ्चालक क्रिकेट खेलाडी पृथु बास्कोटासहित सहित ८ जना प्रहरी हिरासतमा छन्। विश्व चर्चित डीजे मार्समेलोलाई ल्याउने भन्दै टिकट विक्री गरेको र मार्समेलो नआएको भन्दै दर्शकले क्लब तोडफोड गरेका थिए। महंगो मूल्यमा टिकट विक्री गरेको भन्दै सञ्चालक जयन श्रेष्ठ, मयंक खड्का, विशाल डाँगी, मिलन श्रेष्ठ, पृथु बास्कोटा, राजीव महर्जन, आकाश न्यौपाने र रितेश माडवाडीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी ठगी अभियोगमा मुद्धा चलाएको छ।
धर्मगुरुले गुम्वा नै संचालन गरेर यौनकृयाकलाप गर्ने गरेको खुलेको छ। सिन्धुलीका ५६ वर्षीय रिम्पोछे छुल्ठिम दोर्जे योन्जनलाई दक्षिणकालीस्थित गुम्बाबाट प्रहरीले पक्राउ गर्यो।उनले महिलालाई विभिन्न लोभ त्रास र धार्मिक आस्था देखाई शोषण गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।आफू अवतारी लामा भएको र जस्तोसुकै रोग पनि निको पार्ने भन्दै महिलालाई एकान्त कोठामा लगेर जवरजस्ती गर्ने गरेको खुलेको हो।लामाले अरु कसैलाइ सुनाए रोग निको नहुने र मृत्यु हुने भन्दै त्राससमेत फैलाउने गरेको डिआइजी पुष्कर कार्कीले बताए। लामाले सामाजिक सञ्जालमा महिलाको नग्न तस्विरसमेत पोस्ट गर्ने गरेको देखिएको छ।
कमलादीमा भएको गोलीकाण्ड पनि प्रहरीका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्यो। कमलादीको हेरिटेज प्लाजामा रहेको होटलमा युवतीको विषयमा विवाद हुँदा भारतीय नागरिकले गोली चलाएका थिए। प्रहरीले गोली चलाउने भारतीय नागरिक जसवीर सिंह, अरविन्द्र सिंह र देवेन्द्र सिंहलाई पक्राउ गर्न सफल भयो। म्हपी गोलीकाण्डले यो वर्ष आतंकित बनायो। रानीबारी बस्ने गोरखा लाप्राकका कल्याण गुरुङमाथि गोलीप्रहार भएको थियो। घटनामा संलग्न नागार्जुन नगरपालिका–५ स्वयम्भू बस्ने ३६ वर्षीय असुन गुरुङ, चितवन सौराहा–१६ घर भई काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ डेरा गरी बस्ने २३ वर्षीया सविना क्षेत्री, नुवाकोट खानीगाउँ–४ घर भई काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ नयाँबजार डेरा गरी बस्ने ३५ वर्षीय नवराज लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिका–१२ बस्ने ३१ वर्षीय सुरेन्द्र शाही पक्राउ परे।
राति २ बजेसम्म ठमेलको सिएनआइ डिस्कोमा युवतीको विषयमा विवाद हुँदा गोली प्रहार भएको थियो। बा ५७ प ६९५७ नम्बरको स्कुटरमा रहेका कल्याणले सविनालाई पछ्याए।
८.व्यापारीको हत्याः युवतीको प्रयोग
दाङ तुलसीपुरका कपडा व्यापारी ५३ वर्षीय राजकुमार श्रेष्ठको अपहरण गरी हत्या भएको प्रकरणले यो वर्ष सबैलाई त्रसित बनायो। प्रहरीले घटनामा संलग्न केहीलाई पक्राउ गर्न सफल भयो। घटनाका मुख्य योजनाकार मानिएका झिम्पे ४, सल्यानका ३५ वर्षीय मानबहादुर भण्डारी, शान्तिनगर २ घर भई हाल तुलसीपुर ६ बस्ने ४० वर्षीय निर्मल भनिने टीकाराम घर्ती र उनकी १७ वर्षीया छोरी पूजा घर्तीलगायत चार जनालाई पक्राउ गर्न प्रहरी सफल भयो। उनीहरु पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
जेठ २६ गते राति अपहरित श्रेष्ठको शव कुहिएको अवस्थामा असार १६ गते सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका लेक भञ्ज्याङमा रहेको जंगलमा प्रहरीले फेला परेको थियो।पैसा असुल्ने उद्देश्यले श्रेष्ठको अपहरण भएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अपहरणको मुख्य योजनाकार ४० वर्षीय निर्मल भनिने टीकाराम घर्तीले तीन करोड रुपैयाँ फिरौतिको रुपमा मागेको खुलेको हो।
उनले आफ्नी १८ वर्षकी छोरी पूजालाई प्रयोग गरेर अपहरण गरेको खुलेको छ। जेठी छोरी पूजाको रुपजालमा पारेर श्रेष्ठलाई २६ गते व्यापारी श्रेष्ठलाई भेट्न बोलाएको र यसै क्रममा अपहरण गरेको पूजाको बयानमा खुलेको हो।
९.कांग्रेस युवा नेताको हत्या
जाजरकोटमा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता रवीन्द्र शाहको हत्या भयो। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताले हत्या गरेको प्रहरीले बताएको छ।प्रहरीले हत्यामा संलग्न ‘शिव’भन्ने ठगेन्द्रबहादुर सिंह र डिल्ली भन्ने डिलबहादुर रानालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका दुवै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जाजरकोट जिल्ला कार्यसमितिका सदस्य हुन्।
काठमाडाैँ । देउवा सरकारले गरेको ६५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले वृद्धभत्ता पाउने निर्णय पनि कार्यान्वयन नहुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले…
सार्वजनिक शौचालय बनाउन महानगरले जग्गा नै भेटेन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि जग्गा खोजिभइरहेको जनाएको छ । तत्कालका लागि १२ स्थानमा शौचालय निर्माण गर्ने…
बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्ट वर्ष सन् २०१९ को सबैभन्दा कामुक एसियाली महिलाका रुपमा चुनिएकी छन् । बेलायती साप्ताहिकले इस्टर्न…
गौशाला र चाबहिलका होटलमा छापा, आपत्तिजनक अवस्थामा फेला परेका ६ युवती पक्राउ
काठमाडौं । बेश्यावृत्ति हुने गरेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले गौशाला, मित्रपार्क, चाबहिल क्षेत्रमा होटल तथा रेस्टुरेन्टमा छापा हानेको छ। अनैतिक…
काठमाडौं । सरकारले कलंकी–काटेश्वर सडक निर्माण गर्दा डिजाइनमा भएको त्रुटि सच्याउने भएको छ। साढे ९ किलोमिटरको यो सडक निर्माण…